Arzantina: Fandraisan’ny Fanjakana An-tanana Ny Tahirim-bola Fisotroan-drononon’ny Tsy Miankina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Mey 2018 13:30 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Português, Français, عربي, English
Tamin'ny 26 oktobra 2008, nanambara ny governemanta arzantina fa ho apetrany ao amin'ny Kaongresy ny volavolan-dalàna mikasika ny fandraisan'ny fanjakana an-tànana ny rafitra fandraisana fisotroan-dronono [amin'ny fiteny anglisy], raha ambara mazava dia ireo AFJP [amin'ny fiteny anglisy], izany hoe ireo Mpitantana ny Tahirim-bola fisotroan-dronono sy ny Vola Fanampiana. Ireo tahirim-bola manokana ireo no mitantana ny tahiry-fisotroan-dronono an'ireo arzantina an-tapitrisany, ary, araka ilay volavolan-dalàna, ho lasa fananan'ny Fanjakana ireny famatsiambola ireny. Hisy ny adihevitra politika ao amin'ny Kaongresy, saingy eo ampiandrasana izany dia marobe ireo blaogy no mitsikera an'io mety ho fanavaozana io.
Avy any amin'ireo mpanohitra, hevitra roa mivaongana no aroso ho eny aloha: hoe fanodikodinam-bola atao amin'ireo latsakemboka fisotroan-drononon'ireo arzantina marobe io, ary ny antony tokana mandrisika an'io fanavaozana io dia ny fampitomboana ireo vola miditra amin'ny Fanjakana ao anatin'ny fotoana fohy. Guillermo Riera [amin'ny fiteny espanola], manamafy eo amin'ny blaogy Demasiada Información fa:
Raha mbola tohizana ny rafitra fitsinjarazarana, ao anatin'ny roapolo taona dia tsy ho afaka handoa vola fisotroan-dronono intsony ny Fanjakana, tsotra fotsiny satria ho maro ireo mpandray vola fisotroan-dronono ka tsy haharaka intsony ny latsakemboka hiatrehana izany.
Manipika i Esteban Grinberg [amin'ny fiteny espanola], eo amin'ny blaogy De Todo Un Poco, fa:
Ny fialantsinin'ny Governemanta mba hakàn'ny fanjakana ireo tahirim-bola fisotroan-dronono ireo dia ny hoe fitontonganan'ireo AFJP tsy ahitàna tombontsoa, vokatry ny krizy manerantany, izay heverina ho 20%. Tohankevitra iray izay hita ho maimaika sy misy fifanojoana mba hanovàna amboletra ny rafitra fisotroan-dronono.
Hita eo amin'ireo blaogy [amin'ny fiteny espanola] No Me Parece, Speedy González es de la DEA ary La Historia Paralela, ireo fomba fijery hafa mifanohitra amin'io fanavaozana io.
Avy amin'ny lafy manohana ny fanavaozana, lazaina fa misy tsy fahombiazana tanteraka ao amin'ireo AFPJ ary ambany lavitra noho ny rafitra ho an'ny daholobe ireo fisotroan-dronono voarotsaka. Ankoatra izay, mampandoa sarany ambony amin'ireo mpikambana ao aminy ireny tranom-pitantanana ara-bola ireny, na dia tsy misy aza ny tombony azo amin'ny fametrahan'izy ireo vola ao. Eo amin'ny blaogy Los 3 Chiflados [amin'ny fiteny espanola], tsipihina fa manome fahafahana ho an'ireo banky indrindra koa mba hanao fandraharahàna miaraka amin'ny fanjakana ilay rafitra, ary tsy tena nampiasa velively izay tahiry voaangona ho aminà fametrahambola mamokatra. Mendieta el Renegáu [amin'ny fiteny espanola] manampy eo amin'ny blaoginy fa marobe ireo orinasanà media no manao fanentanana manohitra an'io fanavaozana io satria ireo AFJP no tena mpilaza dokambarotra be indrindra. Ireo fomba fijery mahomby hafa [amin'ny fiteny espanola] mikasika ity fanavaozana ity dia azo vakiana ao amin'ny El Bar de Moe sy eo amin'ny blaogy an'i Miguel Contissa . Melohin'ity farany fa ao anatin'ireo saram-pitantanana takian'ireo AFJP amin'ireo mpikambana ao aminy dia tafiditra ao ihany koa ny vidin'ny dokambarotra.
Navoaka teo amin'ireo blaogy Traders del Merval, Kust, Al Centro y Adentro, sy ny an'i Leo Piccioli ihany koa, ireo lahatsoratra hafa mikasika io lohahevitra io.
El Salvador 6 andro izay